Konke malunga neenwele ezimhlophe: oonobangela, ukhetho, ukhathalelo nokunye okuninzi! | Amadoda aQinisekileyo
Njengemibimbi, iinwele ezimhlophe zitolikwa njengophawu lokuhamba kwexesha ... uphawu lokuguga. Kodwa akukho nto iphosakeleyo ngayo.
Ngapha koko, iinwele ezingwevu zithathwa njengezinomtsalane, ngakumbi xa zidityaniswe neempawu ezinje ngesinxibo esihle kunye nokuzithemba. Kwakhona, nangona belahlekelwe sisakhono sokuvelisa umbala, iifollic zisaphila. Abalingisi inokuba sisizathu sokubhiyozela amadoda amaninzi.
1 Kutheni kuvela iinwele ezingwevu?
2 Uyabambatha okanye uwagqume?
3 Iinwele ezimhlophe neendevu
4 Ungazikhathalela njani iinwele ezimhlophe
Kutheni kuvela iinwele ezingwevu?
Iinwele zokuqala ezingwevu zihlala zivela kwiindevu okanye kwiitempile. Ihlala isenzeka kwiminyaka yabo yamashumi amahlanu, kodwa ayothusi into yokuba amadoda angafikanga kwiminyaka engama-30 ubudala abone iinwele zawo ziqala ukuba mhlophe. Ngayiphi na imeko, akukho sidingo sokukhathazeka, kuba ayisiyonto ekhawulezileyo. Ngokubanzi, umzimba ukubonelela ngexesha elaneleyo ukuba uqhelane nabo kancinci kancinci.
Kodwa yintoni unobangela? Ngaba ikhona into enokwenziwa ngayo? Unobangela kukuba Iiseli zombala ezijongene nofaka umbala kwizinwele (melanin) ziyeke ukuveliswa. Iinwele ezimbalwa ezimhlophe azitshintshi ukubonakala kweenwele. Ukuba bafikelela kwinani eliphezulu, isiphumo sineenwele ezingwevu, ezidityaniswa nezinwele zombala ezifakwe kwizinwele ezimhlophe.
Kukho izinto zangaphandle, ezinje ngoxinzelelo, ezinokuchaphazela umbala weenwele. Kwiimeko ezinjalo, ngokulwa unobangela, inkqubo inokumiswa. Kodwa Ngokwesiqhelo iinwele ezimhlophe zibangelwa yimfuza, ke akukho nto ingako onokuyenza ukuyiphepha. Ukuba abazali bakho babenezimvi ebutsheni babo, amathuba okuba ulungile nawe.
Uyabambatha okanye uwagqume?
Kuhlala kukho umbuzo wento enokuyenza ngeenwele ezingwevu. Kukho iindlela ezimbini onokuzifunda: ukubanga okanye ukuzigquma. Ukuwola yeyona ndlela ihlala ithathwa njengeyona ilungileyo. Baninzi abantu abadumileyo abaye baba ngoonozakuzaku beenwele ezimhlophe: uViggo Mortensen, uJosé Mourinho kwaye ngakumbi uGeorge Clooney. Izinwele ezingwevu ziye zaba yenye yeempawu zomdlali odumileyo waseMelika.
Ukuvumela izinto zithathe ikhosi yazo kubonisa indalo. Olunye uncedo lweenwele ezimhlophe kukuqikelelwa kwamava, isimilo kunye nokuzithemba. Ngokwendalo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukonga ixesha kunye nemali (ukongeza kwigalelo elenzayo kwizinwele) ngokuhambisa iidayi.
Ukuba ukhethe ukwamkela iinwele ezingwevu, kodwa uzive ngathi ufuna ukwenza into ukuyiphelisa, cinga ngokucheba iinwele ngokufutshane. Ukuba uthanda ukunxiba iinwele ezinde, ingwevu iya kubaxwa, ayisiyongxaki kwaphela leyo. Konke kuxhomekeke kunwele olungele wena.
Xa kuziwa ekubagubungeleni, kunokukunceda ubonakale umncinci. Nangona kunjalo, kukho umngcipheko wokuba, ngenxa yedayi, iinwele ziya kuthi ziphelise umdla ngakumbi kunokuba kufanelekile. Oku kwenzeka ngakumbi xa iinwele ezintle zigutyungelwe ngombala omnyama. Kananjalo, ngelixa ukubanga kukhawuleza kwaye kulula, ukugubungela kufuna umsebenzi othile.
Thatha isigqibo kukhetho olunye kwezi zimbini ngokusekwe kukhetho lwakho kwaye ukusuka apho usebenza kwiinkcukacha zokufumana olona hlobo lubalaseleyo.
Iinwele ezimhlophe neendevu
Izinwele neendevu azisoloko zijika zimhlophe kwinqanaba elifanayo, ehlala ibangela amadoda aneenwele ezingwevu kunye neendevu ezimdaka, umzekelo. Inyaniso yokuba iinwele zakho zobuso azihambelani nombala weenwele zakho zinokuzenza nzima izinto, kodwa ayisoloko iba ngumqobo.
Oku kubini kunokusebenza kwiimeko ezininzi, ngakumbi ukuba izinto zigcinwa zicocekile kwaye zilula. Ngokwendalo, isicwangciso esinjalo asonelanga ukuphelisa ukungalingani. Ukuba uziva ukuba ububini abukho mnandi kwaphela ebusweni bakho, Kuhlala kukho ubutyebi bokusebenzisa incakuba.
Ungazikhathalela njani iinwele ezimhlophe
Ukugcina iinwele zakho zisempilweni kubaluleke ngakumbi xa kuziwa kwizinwele ezimhlophe, nokuba uya kunqunyulwa iinwele ezimfutshane okanye uzigcine ixesha elide. Ukunqongophala kwe-melanin kwenza ukuba iinwele zichaphazeleke ngakumbi kukulimala kwelanga kunye nombala.
Iimveliso eziqhelekileyo zinokusebenza, kodwa kukwakho neeshampu kunye izixhobo zeenwele ezingwevu. Cinga ukuzisebenzisa ukulwa ukoma kokongeza ukukhanya, ivolumu kunye nolawulo. Zisebenzise rhoqo, uhlikihla isikhumba sekhanda imizuzu emininzi. Ukuphulula kuluncedo kulo naluphi na uhlobo lweenwelenjengoko ukunikezelwa kwegazi kunye nokondla kweefollic kukhuthazwa.
Xa kufikwa ekutyeni, iiprotein (iqanda, iquinoa…) kunye ne-omega 3 fatty acids (isalmon, walnuts…) zibalulekile. Abokuqala bongeza amandla ezinweleni, ngelixa i-omega 3 ineziphumo zokuthambisa, ukuyithintela ukuba ingajongi yomile kwaye ithuntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Isitayile esinenwele » Iinwele ezimhlophe emadodeni